सभ्य देशमा असभ्य एनआरएनए ! – Gorkhali Voice
सभ्य देशमा असभ्य एनआरएनए !
२०७८, २ श्रावण शनिबार १०:४४
फोटो जनहीत न्युज
त्यसै कसैलाई छि – छि भन्ने रहर हुँदैन । त्यस्का गतिविधीले उक्त शब्द उचारण गर्न बाध्य बनाउछ। त्यस्तै भएको छ अहिले एनआरएनए जापानमा । हुन त हामी यतिबेला विश्वकै सभ्य मुलुकहरु मध्ये पर्ने जापानका छौं l जहा हामी कर्म गरिरहेक छौं र पनि हाम्रा गतिविधी भने सभ्य छैन । व्यक्ति मात्र नभई नेपालीका लागि भनेर स्थापना गरिएको संस्थाहरु भष्ट्रचारमा चुर्लुम्ब डुबेको देख्दा उदेक लागेर आउछ। अझ आफुलाई नेपाली साझा संस्था भनेर कहिलैं नथाक्ने एनआरएनए भित्रको गतिविधीले हरेक नेपालीको मुखबाट छि -छि भन्ने शब्द आएको छ । आफुलाई एनआरएनएका अभियनता घोषणा गर्नेहरु जापानमा अरु कुरा त छोडौं , संस्था अनि संस्थामा नेत्तृत्व गरेका महाशयहरुले हरेक ठाँउमा भष्ट्रचार गरेका छन्। यति सम्म कि जापानमा दुर्घटना परेर मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई आएको राहत रकम पनि विचैंमा खानेहरु देख्दा छि – छि एनआरएनए नभनि कस्ले आहा एनआरएनए भन्न सक्ला र ?
पछिल्लो समय जापानमा एनआरएनएको नेता बन्नका लागि सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन्। भोट माग्नेको ताँतिनै देख्न सकिन्छ। आफुले जितेपछि सारा काम गर्ने ठेलिनै प्रस्तुत गरिएका छन्। थाहा छ , चुनाव जितेपछि केहि हुने बाला छैन। अन्यमा एनआरएनएमा अब जितेर आउनेलाई यौटैं मात्र अनुरोध छ। एनआरएनएमा गएर केहि काम गर्न नसके पनि तपाईहरुका गतिविधीले छि – छि एनआरएनए भन्न नपरोस ।
“आजको नारी काँधमा जिम्मेवारी” प्रतिवद्धता-पत्र प्रस्तुत गर्दै NRNA जापानको अध्यक्ष पदमा अनिता गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा
नागोयामा र्निवाचन समितिले मुख खोल्यो ,दुबै समितिले लिए सपथ ।